Amadoda aSitayela Kwavela ngonyaka ka-2008 njengesinyathelo esasifuna ukuhlanganisa zonke izindaba ezithinta indoda ekhoneni elifanayo. Ngale ndlela, inhloso yethu ukuthi abasebenzisi bale webhusayithi bakwazi ukuzigcina befanelekile, bagqoke kahle futhi bagcine inhlanzeko efanele nokunakekelwa komuntu siqu. Ngamafuphi, labo basebenzisi be-Intanethi banabesilisa abaneSitayela i-axis yabo yokubhekisela kwi-Intanethi.
Ngokwemvelo, lokhu kungenzeka kuphela ngenxa yeqembu lokuhlela elingemuva kwe-HcE, ongalithola ngezansi. Uma ucabanga ukuthi ungafaka isandla kusayithi lethu futhi ufuna ukujoyina leli qembu labahleli, ungaxhumana nathi lapha. Ungavakashela futhi isigaba sethu izigaba, lapho ungafunda khona zonke izihloko esizishicilele eminyakeni edlule.
Kuyinhlonipho ukukwazi ukunikeza amadoda izeluleko ezinhle kakhulu ngezitayela, ukunakekelwa kanye nendlela yokuphila. Ngiyazifela ngayo yonke into ehlobene nomhlaba wakhe futhi ngiyakwazi ukuthola ubuncane bezimonyo nokuhlukahluka okukhona kwisitayela sakhe semfashini. Thola konke ongakuthola ngamathiphu athile namasu engiwaphakamisa lapha.
Ngithanda ukuphila impilo enempilo, ukuzivocavoca umzimba nokudla ukudla okunempilo. Ngalokho, ngigcina nginolwazi ngezindaba zezempilo ngithinta abezindaba abahlukahlukene. Futhi, nginentshisekelo yokwabelana ngakho konke engikufundayo kwimithombo yami.
Ngiyakuthanda umhlaba wokuphila okunempilo, ikakhulukazi izihloko ezihlobene nokuqina nokudla. Ukulandela njalo umthetho we-'Mens sana ku-corpore sana '. Futhi ngombono wesayensi. Ngaphezu kwalokho, nginoqeqesho ezindabeni zezempilo nezokuvikela ubungozi, nokuphathwa kwemvelo ezinkampanini. Okubalulekile, ngoba awukwazi ukuthola impilo ngaphandle kwemvelo enempilo.
Ngingumqeqeshi wami futhi ngondlayo kwezemidlalo. Bengizinikela emhlabeni wokuqina nokudla okunomsoco iminyaka eminingi futhi ngiyazifela ngakho konke ngakho. Kule bhulogi nginomuzwa wokuthi nginganikela lonke ulwazi lwami mayelana nokwakha umzimba, ukuthi ngithola kanjani ukudla okulungile hhayi nje ukuthola umzimba omuhle, kepha ukuthola impilo.
Ngiyayithanda imfashini yamadoda. Uma uthanda ukugcina usesikhathini nakho konke okwenzekayo ngemfashini nobuhle emadodeni ngincoma ukuthi ufunde izindatshana zami.
Wazalelwa eMalaga ngo-1965, uFausto Antonio Ramírez uhlala eba negalelo emithonjeni ehlukahlukene yedijithali. Umbhali olandisayo, unezincwadi ezimbalwa emakethe. Njengamanje usebenzela inoveli entsha. Enentshisekelo ngomhlaba wemfashini, impilo yemvelo, nobuhle besilisa, usebenzele abezindaba abehlukene abakhethekile kule ndaba.
Isitayela, umthengisi obukwayo kanye nomhleli wemfashini nendlela yokuphila. Njengamanje ngisebenzisana namafemu ahlukahlukene kanye nabezindaba njengebhizinisi elizimele. Ungangilandela kubhulogi lami siqu, futhi-ke, ungifundele 'Amadoda Anesitayela'.